Fanontaniana Mateti- Mpitranga - I2P
Fanontaniana Mateti- Mpitranga
Inona ny solon-tsaina handehanan'ny I2P?
Inona ny atao hoe "eepsite" dia ahoana ny atao mba ahafahan'ny Fitadiavako mampiasa izany?
Inona ny dikan'ny Active x/y isa eo amin'ny route console ?
"exit node"(outproxy) mankany amin'ny tranonakala ara-dalana ve ny router ko? Tsy tiako ho izay no fiasany.
Tsy tafihiditra ny tranonkala ara-dalàna avy amin'i I2P aho
Mampanahy ve ny fampiasana ny Outproxy ?
Misy tranonkala tsy mifanahaka amin'ny fihevitro. Ahoana no hanakanako azy tsy ho voatahiry na ho tafiditro?
Ahoana no hanomanako ny browser ko ?
Ahoana no fomba hifandraisako amin'ny IRC avy ao anaty I2P?
Ahoana no fomba hanaovako ny pejiko eto amin'ny tranonkala eepsite?
Inona ny ports ampiasain'i I2P?
Tsy ampy betsaka ny hosts ato amin'ny bokin' adiresiko. Aiza no mety ahitako fifandraisana tsaratsara kokoa?
Ahoana ho ahafahako mahazo ny web console avy amin'ny milina hafa ary miaro azy amin'ny teny miafina?
Ahoana ny fomba fanaovako fampiarana avy amin'ny milina hafa?
Azo atao ve ny mampiasa an'i I2P ho SOCKS proxy?
Ahoana ny fomba hanaovako reseed ?
Ahoana no ahafahako mahazo IRC, Bit Torrent, sy ny servisy hafa ao amin'ny tranonkala ara-dalana?
Tsy tafihiditra https:// na ftp:// avy amin'i I2P aho.
Mampiasa CPU be loatra ny router ko ?!?
Ny router ko dia velona nandritry ny fotoana maromaro dia tsy ahitako fifandraisana mihitsy eo aminy
Vitsy loatra ny Peers miasa eto amin'ny router-ko, tsy misy atahorana?
Ny active peers /known peers/participating tunnels/connections / bandwidth dia miovaova izay tsy izay isan'andro! Inona ny olana ?
Ao anatin'ny wrapper.log dia mahita sora-pahadisoana milaza hoe Protocol family unavailable aho, rehefa miakatra i I2P
Maty ny ankamaroan'ny tranonkala ao amin'ny I2P?
Fa maninona i I2P no mihaino eo amin'ny varavarana 32000?
Ohatran'ny nahita lesoka aho, aiza no fanaovako tatitra ?
Inona no atao hoe "eepsite"?
"exit node" mankany amin'ny Internet ara-dalana ve ny router-ko? Tsy tiako ho izay no fiasany.
Ny port I2P eo antoerana sy ny port'ny fantsona I2P dia tsy hilaina ny mahita azy any amin'ny solon'tsaina hafa, fa *tokony* ho hita eo an-toerana. Azo atao ny mamorona port fanampiny ho an'ny fantsona hafa avy eo amin'ny http://localhost:7657/i2ptunnel/ (ary, tokony sokafana ny rindrin'afo mba ahafahana mifandray samy eo antoerana, fa tsy avela ihiditra ny avy any ivelany, raha tsy hoe tiana atao).
Ka, raha fintinina, tsy dia ilaina loatra ny ahitan'olon'kafa ny zavatra ao aminao, nefa raha mety ho amboarina ny NAT/rindrin'afo ahafahana mampihiditra ny UDP sy TCP nyoutbound facing port, dia ahazo fiovana tsara ianao. Tokony ho afaka mandefa UDP packets any amin'ny olona voatondro iray ianao ( tsy dia mety loatra ny fanakanana IP amin'ny fampiasana ny PeerGuardian - aza atao izany).
Raha mila filazana be be kokoa momba ny socks proxy, dia misy fanampiana ato socks page.
Mety maro ny antony mahatonga ny CPU ho sempotra. Inty misy lisitra tokony ho jerena:
Mampiasa BitTorrent eo ambonin'i I2P ve ianao ? Andramo ny mampihena ny isan'ny torrents, ny haben'ny bandwidth, na koa vonoy tanteraka, mety manampy ihany izany.
Mba ahazoanao zavatra tsara dia ampiasao ny modely I2P farany.
Ao anatin'ny wrapper.log Dia ahitako sora-pahadisoana izay mampiseho "Protocol family unavailable" rehefa mampiakatra ny fibaikoana ny router.
Ity hadisoana ity dia ho hita matetika eo amin'ny tambazotra mampiasa java eo amin'ny fitaovana izay natao ampiasa IPV6. Misy fomba vitsivitsy ialana amin'izany:
Eo amin'ny Linux, dia azo atao echo 0 > /proc/sys/net/ipv6/bindv6only
Jereo ireto andalana ireo ao amin'ny wrapper.config.
Raha eo ireo andalana ireo, esory ny "#". Raha tsy eo kosa izy ireo, ampio fa tsy asiana ny "#".
Tetika iray hafa ny manaisotra ny ::1 from ~/.i2p/clients.config
TANDREMO: Mba ahafahan'ny wrapper.configmiasa, dia tsy maintsy vonoina ny router sy ny wrapper. Ny fanindriana ny Restart eo amin'ny fibaikoana ny router dia TSY hamaky an'ity fisy ity! Tsy maintsy tsindriana ny Shutdown,ary miandrasa 11 minitra, dia velomy i I2P.
Raha jerena ny tranon'kala namboarina teto amin'ny tambazotra miafina, dia eny, maty avokoa izy ireo. Ny olona sy ny pejy dia mandeha sy miverina. Ny fomba tsara indrindra hanombohanao ny I2P dia ny fitiliana ny lisitry ny pejy mandeha. http://identiguy.i2p.xyz tracks active eepsites.
Fa nahoana no mihaino eo amin'ny port 32000 ny I2P?